मनोज कुमार आइतवार, पुष २२, २०७५, ०९:१२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । मैथली गीत संगितमा एकदशकदेखि लागिपरेका गायक दप्पती गुरुशरण सदा र शान्ति सदा मैथली गीत संगितको उत्थान एवम विकासका लागि कार्यरत्त छन् । । शनिबारमात्र हिमाल पहाड घर मेरो तराई आँगन युगल स्वरमा सजिएको गीत सार्वजनिक भएको छ । मैथली गीत संगितको अवस्थाका बारमा गायक गुरुशरण सदासँग जनतापाटीका सहकर्मी मनोज कुमार महतोले गरेको कुराकानी
मैथली गीत संगितको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
अहिले मैथली गीत संगितको अवस्था हेर्ने हो भने पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भएको देखिन्छ । पहिला पहिला ज्यादै कम गीत बजारमा आउने गथ्र्यो भने पछिल्लो समय संख्यात्मक रुपमा बढी गीत बजारमा आउन थालेको छ । यसले गर्दा मैथली गीतले बल्ल गति लिन थालेको भन्न सकिन्छ ।
बजारमा बढी गीत आएर मात्र हुन्छ की गुणात्मक रुपमा पनि सुधार भएको पाउनुहुन्छ ?
एक त पहिला मैथली गीत नै कम आउने गथ्र्यो बल्ल बल्ल यो क्षेत्रमा धेरै गीत आउन थालेकोछ । अब धेरै गीत आउँद कति गीत राम्रा पनि आएको छ । पछिल्लो समय राम्रो गीतमा भागवत मण्डलको दिल मै बस्लु आहा र सन्नु कुमारको कोशी पारमै चलु हमर गाममै लगायतका गीतले मिथिला गीतको बजारमा चर्चा कमाइरहेको पाउँछौं ।
तपाईको आजदेखि बजारमा राष्ट्रिय गीत हिमाल पहाड घर मेरो तराई आँगन ... भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मैथली गीतमा रमाईरहँदा नेपाली गीतमा पनि हात हाल्नु भयो मुलधारमा आउनु खोज्नु भएको हो ?
हेर्नुुस म एक मधेसी भए पनि म एक नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिक भएकाले मेरो देश, मेरो राष्ट्र मलाई प्यारो छ । त्यसैले मेलै मधेस र पहाडलाई कलाको माध्यमबाट जोड्ने प्रयास गरेको छु । हामी नेपाली एक भएर बाँच्नुपर्छ । यो गितले पनि यहि सन्देश दिन खोजेको छ । र रह्यो कुरा नेपाली गीतको मैथली गीतमा त मैले पहिलादेखि नै गर्दै आएको छु यो मेरो नयाँ पाइला हो ।
मैथली गीतसंगितको पछि पर्नुका कारण के देख्नुहुन्छ तपाई ?
मैथली गीत संगित पछि पर्नुका कारण के हो गीत रेकडिङ गर्ने स्टुडियोको अभाव, सहज पहुँच नहुनुले गर्दा पछडि परेका हो की जस्तो लाग्छ मलाई । गीत रेकर्ड गर्न हामी गंगा क्यासेट भारत नै जानुपर्ने अवस्था थियो कि त काठमाडौंमा नै जानुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले पनि मैथली गीत संगितको प्रबर्धनका लागि सहयोग नगरेकाले पनि पछाडी परको हो ।
देश अहिले संघीयतामा पनि गएको छ । प्रदेश नं २ त मिथिलाभाषी बढी बसोबास गरेको क्षेत्र पनि हो । अव प्रदेश सरकारले मिथिला कलाको विकासका लागि के के कुरा आवश्यक छ ?
प्रदेश सरकारले दुई वटा काम गर्न आवश्यक छ । पहिलो भएको कलाको संरक्षण अनी दोस्रो मैथली कलाको प्रर्वधन गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय त मैथली गीतमा विकृती पनि आउन थालेको छ नी ?
हो तपाइले भनेको सहि हो । पछिल्लो समय जो यो क्षेत्रमा रहरले लागेका युवाहरु छन् उनीहरु छिटो चर्चित हुनका लागि गीतमा डिजे साउण्ड बढी हाल्ने गरेको छ । कतिपयमा भोजपुरी गीतको दुइअर्थी शब्द पनि आउन थालेको छ । यसले मिथिलाको गीत संगितमा विकृती फैलाएको छ । समयमा नै यस्ता विकृती रोक्नुपर्छ नभए यसले हाम्रो छवी नै धमिलो पनि बनाउँछ ।
श्रीमान श्रीमती नै गायन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ । समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी दुबै जना यसै क्षेत्रमा लागेको हुनाले दुबैले बुझेका छौं यो क्षेत्रलाई समय व्यवस्थापन पनि हामी त्यसैको आधारमा घरको कामदेखि छोराछोरीलाई रेखदेख अनी सम्पुर्ण कार्य सहमतिमा नै गर्ने गरेका छौं ।
अन्तयमा नयाँ आउने युवालाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जो युवा मिथिला गीत संगितमा आउन चाहन्छ म उनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने साधाना गरेर र बुझेर मात्र यो क्षेत्रमा लाग्न अनुरोध गर्छु ।
विप्लव बन्दको प्रभाव : विस्फोटनका घटना बढी, सडकमा कार्यकर्ता शून्य ! बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५, १३:००:००
भविष्यमा ठूलो पर्दामा खेल्ने सोच छ : सुदिपजंग खासमा म अविवाहित भएकोले व्यक्तिगत रुपमा मलाई पुगिरहेको छ तर यसैको कमाईबाट परिवारलाई भने आर्थिक सहयोग गर्न सकेकोचाही छैन् । यसैक्षेत्रमा लागेर पनि जीवननिर्वाह गर्न सकिन्छ तर विलासिताका बस्तु खरिद गर्ने लक्जरी लाईफ विताउँने सोच भएकालाई अलि गाह्रो भने हुन्छ । नभए धेरैले यसैक्षेत्रमा लागेर नाम र दाम दुबै कमाएका छन् । सोमवार, फाल्गुन १३, २०७५, ११:३६:००
‘लकडाउन सरकारलाई होइन, जनताको जीवनका लागि’ - प्रधानमन्त्री ओली
हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर छौँ - मन्त्री सुवेदी